Indawo yokupaka yokupaka - China Abakhiqizi Bokupaka, China abahlinzeki
Ifektri yethu inezinto zokukhiqiza ezithuthukile, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuvuthiwe, nomthamo wokukhiqiza ozinzile. Kungakhathaliseki ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo noma ukupakisha, sizibophezele ekunikezeni amakhasimende okuhle kakhulu. Ngesisekelo sokuthembana, sisungule ubungani besikhathi eside nokubambisana namakhasimende ethu. Ngoba sizimisele ukuhamba ibanga elingaphezulu, sizethemba ngokwanele ukuthi ngibe owokuqala ozikhethelayo nozakwethu unomphela kulo mkhakha.
12V Auto A / C samandla Ukwakha Factory Ukuze Suba ...
Brand New AC samandla nge bamba Ukuze Nissan Juke ...
12V Auto Ac samandla For Mitsubishi Colt / MITSUBI ...
12v 24v ephathekayo Universal Roof Phezulu egibele Truck Sl ...
Isimo Samaloli Sokulala Somhlaba Wonke 12v 24v Electric Car Parking Cooler Air Conditioners
Uhlelo lwefriji lusebenzisa ifriji efrijini ephephile futhi eyonga imvelo ngu-R134A, ukuze i-air conditioner yokupaka ibe yomoya owonga amandla futhi olungele imvelo. Uma kuqhathaniswa nama-air conditioners wendabuko wendiza, ama-air conditioners wokupaka awadingi ukuthembela kumandla enjini yemoto, angagcina uphethiloli futhi anciphise ukungcoliswa kwemvelo.
12v 24v ephathekayo Universal Roof Phezulu Onyuswe Truck Sleeper Electric Auto yokupaka Cooler Ekupholiseni
Ehlobo elishisayo, ukushayela imini nobusuku, ukushisa okushisayo, i-smart car inverter air conditioner ingalawula kude ukushisa emotweni, ikuvumela ukuthi ulungise kude ukushisa emotweni lapho ulala phansi, futhi ujabulele ukuphola lapho kushisa . Lolu hlobo lokupholisa umoya lusebenza kahle futhi longa amandla, lusebenza ngokuzinzile, umsindo ophansi, futhi lungapholisa masinyane isikhala semoto ukuze likulethele imizwa emihle lapho ushayela noma usebenza. Le-air conditioner ephathekayo ilungele izimoto ezinkulu, amaloli, amabhasi, ama-RV, izikebhe, izimoto zobunjiniyela, njll. Uma kushisa, noma ngabe iyashayela noma ayishayeli, ingapholisa izinga lokushisa emotweni.